▷ Ultra HD Vs QLED TV: Waa maxay faraqa u dhexeeya? - 【 Isbarbardhigga】 2022
Ultra HD vs QLED TV: waa maxay faraqa u dhexeeya?
Ma tahay inaad iibsato QLED TV ama Ultra HD TV? Haddii aad niyadda ku hayso inaad iibsato TV cusub, waxay u badan tahay inaad la kulantay labada shuruudood. Maxay ula jeedaan? Ma u baahan tahay? Suurtagal ma tahay in la helo labadaba?
Si laga bilaabo, Inta badan TV-yada QLED ee maanta la heli karo waa 4K TV. Dhab ahaantii, dhammaan TV-yada QLED ee iibka ah waxay leeyihiin xallinta ugu yar ee 4K, markaa ficil ahaan ma heli kartid kii hore la'aanteed kan dambe. Markaan sidaas yidhi. waa suurtogal in la helo 4K Ultra HD TV oo aan lahayn QLED; Waxa kale oo jira LED-LCD iyo TV-yo badan oo joogto ah.
Suuqa telefishinka waxaa ka buuxa magacyo si ula kac ah loogu jahawareeray horumarka sawir-qaadista ee cusub, dib-u-eegista naqshadaynta, iyo ku celcelinta cusub ee loogu talagalay in iibsashada telefishinka laga dhigo jimicsi tijaabo ah. Si aad u hesho QLED iyo Ultra HD, waxa ugu wanaagsan in la ogaado waxay yihiin iyo sababta aad ugu baahan tahay.
Markaa tani waa waxa saxda ah ee aad u baahan tahay inaad ka ogaato QLED iyo Ultra HD, iyo booska uu kaga jiro suuqa telefishinka.
Heshiisyada Samsung TV ee maanta ugu wanaagsan
Nidaamyada TD-Smart TV Hey Google Kaaliyaha Rasmiga ah - 32 Inj TV, Xakamaynta Codka,...
✅ Jiilka labaad ee DVB-T2/C/S2 tuner telefiishanka dhijitaalka ah oo leh Hbbtv.
1 Waa maxay QLED?
2 Waa maxay Ultra HD?
3 Laakiin ma u baahan tahay Ultra HD?
4 Sidee QLED u shaqeysaa? Miyay ka duwan tahay OLED?
5 Waa maxay Neo QLED? LED-yar? Micro LED?
6 Ma inaad iibsataa QLED 4K Ultra HD TV?
Waa maxay QLED?
QLED, haddii aadan waligaa maqlin, asal ahaan waa TV-ga LED-LCD bararsan oo ah nooca soo jiray tobanaan sano.
QLED waxay u taagan tahay Quantum Dot Light Emitting Diode.. Inkasta oo Samsung ay samayso noocyo badan oo telefishin ah, TV-ga QLED waa tignoolajiyada guddi-dhamaadka sare ah ee ay soo saartay, sida aad arki karto haddii aad eegto Samsung TV-yada cusub ee sanadkan.
Waa maxay Ultra HD?
Dhinaca kale, Ultra HD waa muuqaal TV ah oo meel kasta laga heli karo TV-yada cusub ee ku dhow 40 inji. Soo gaabinta "Qeexidda ultra sare", Ultra HD guud ahaan waxa loola jeedaa telefishinada leh xallinta 4K. Waxaad maqli doontaa dad ka hadlaya TV-yada Ultra HD iyo 4K TV, laakiin waa isku mid.
Marka la eego fiiqnaanta, hadda waxay si adag ugu jiraan guud ahaan, iyagoo beddelay TV-yada Full HD ee ka jilicsan, laakiin aan u faahfaahsanayn sida soo socota ee telefishanka 8K.
Hadda, 4K Ultra HD TV-yada ayaa ah meesha ugu macaan ee TV-yada waaweyn labadaba xagga tignoolajiyada iyo qiimaha labadaba, inkastoo doorashada QLED ay sidoo kale aad u dhib badan tahay. Tusaale ahaan, Samsung waxay samaysaa 4K QLED TVs, laakiin sidoo kale 4K LED TVs, Micro LED TVs, iyo kuwa jahawareer ku ah magaca Neo QLED TVs (QLED, laakiin leh Mini LED backlight).
"Ultra HD" waxaa loola jeedaa heerka shaleemada dhijitaalka ah ee 4K, halka "4K" ay u egtahay in loo isticmaalo TV-yada macaamiisha guriga. Si kastaba ha noqotee, 4K hadda waa xallinta pixel ee ugu caansan TV-ga. Ultra HD TV-yada waxay isticmaalaan 3840 x 2160 pixel panel, oo loo yaqaan 2160p, laakiin sidoo kale 4K sababtoo ah sawiradu waxay ku dhow yihiin 4000 pixels ballaaran.
Laakiin ma u baahan tahay Ultra HD?
Haa, haddii kaliya sababtoo ah tani waxay noqon doontaa muuqaal aan caadi ahayn oo ku dhawaad ​​​​dhammaan TV-yada ku dhow 40 inji iyo ka weyn, ilaa aad u tagto moodel 8K ah oo aad qaali u ah ama TV aad u yar. Markaa haddii aadan ahayn Raadinta TV 32-inch ah, laga yaabee qolka jiifka, waxaad hubaal ahaan u raadin doontaa 4K Ultra HD TV.
(Sumcada sawirka: Samsung)
Iyadoo Ilaha asalka ah ee 4K waa yar, hadda si degdeg ah u koraya. heli doona Waxyaabaha asalka u ah 4K ee Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Hulu, Rakuten TV iyo adeegyada kale ee TV-ga ee qulqulka, iyo sidoo kale Ultra HD Blu-ray discs, halka Apple TV 4K, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5 iyo Xbox Series X ay dhamaantood bixiyaan nuxurka 4K.
Sidee QLED u shaqeysaa? Miyay ka duwan tahay OLED?
TV-yada QLED waxay isticmaalaan shaandhada "quantum dot". Ka samaysan ultra-yar, qaybaha semiconductor si sax ah loo kontrooli karo, filtarrada dhibcaha quantum waxaa lagu xakameyn karaa si sax ah wax soo saarka midabka, kaas oo Waxay asal ahaan ka caawisaa abuurista sawir ifaya iyo midab ballaadhan.
Sidaas, Haddii aad eegto 4K LED TV iyo 4K QLED TV, xeerka guud ee suulka ayaa ah in QLED TV uu ka fiicnaan doono dhinaca saxnaanta midabka. Halka Samsung ay iibiso inta badan TV-yada QLED, waxay sidoo kale siisaa TCL iyo Hisense.
OLED vs. QLED? waa su'aal inta badan ay weydiiyaan kuwa doonaya inay iibsadaan TV-ga qaaliga ah, laakiin waxay inta badan ku saleysan tahay faham la'aanta waxa uu yahay TV-ga QLED. Magaca QLED ee ku dhawaad ​​​​alifbeetada wuxuu ka dhigayaa mid u eg beddelka tignoolajiyada OLED (iftiin ifaya ee organic), laakiin aad bay uga duwan yihiin.
pixels-yada ku jira TV-ga QLED waxaa iftiimiyay iftiin-dhabe oo hore u ahaa (Iftiin toos ah iyo nalka geesaha). Sidaa darteed, TV-yada QLED kuma muujiyaan meelaha madow sawirada sida TV-yada OLED. Taasi waa sababta OLED TV-yada ay xukumaan pixels kasta oo ay ka khafiifsan yihiin bilowga. TV-yada OLED waxay sidoo kale bixiyaan xaglo daawasho oo aad u ballaaran, jeexjeexyo siman, iyo heerar madow oo ka wanaagsan, kuwaas oo waxay la macno tahay in ay guud ahaan u roon yihiin filimada.
Si kastaba ha ahaatee, TV-yada QLED waxay soo baxaan marka lagu isticmaalo qolalka iftiinka wanaagsaniyo sidoo kale kombuyuutarrada kombuyuutarrada iyo laptop-yada. Arrimaha QLED vs OLED waxay sii ahaanayaan marka ay iska horkeenaan Samsung, oo ah kan kaliya ee sameeya guddiga QLED, ee ka dhanka ah LG, oo ah kan kaliya ee sameeya OLED, kaas oo siiya Sony, Panasonic iyo Philips.
Waa maxay Neo QLED? LED-yar? Micro LED?
Sida laga yaabo inaad dareentay, Samsung ayaa shaqeeya ciidamada hal-abuurka suuq-geynta si ay ula yimaadaan ereybixin dhib badan, kan ugu dambeeyay ee Neo QLED. laga helay Shaxda TV-ga Samsung ee 2021, waa magaca Samsung ee wax badan oo soo saarayaasha TV-ga isticmaala: Mini LED. TV-yada yaryar ee LED-yada waxay isticmaalaan "lakabka yar yar" ee iftiinka dambe si ay ugu hagaan iftiinka LED-yada yaryar iyada oo loo marayo dhibcaha tirada ee loo isticmaalo TV-yada QLED. Natiijada kama dambaysta ahi waa xakamaynta gloss ka fiican.
Micro LED waa tignoolajiyada guddiga TV-ga gabi ahaanba cusub (oo aad qaali u ah). taasoo ku hanjabaysa inay QLED ka mamnuuci doonto taariikhda. Waxay jirtay ilaa iyo markii Samsung ay soo saartay "Darbiga" Micro LED 2018, in kasta oo horaantii 2021 Samsung's Micro LED TV uu bilaabay 110-inch, 99-inch iyo 88-inch.
Sida aad qiyaasi lahayd, tignoolajiyadan cusub - oo adeegsata LED-yada pixel-ka si ay u abuurto muuqaalo ifaya, muuqaalo isbarbar dhigaya oo awood yar leh - waa, hadda, dhammaan iyo kaliya TV-yada daanyeerka leh oo aadan runtii awoodin. bixin. Tani waa arrin maskaxda lagu hayo mustaqbalka; u diyaar garow dood u dhaxaysa Micro LED iyo OLED.
(Sawirka: Samsung Q80T QLED 2020 TV). (Sumcada sawirka: Samsung)
Ma inaad iibsataa QLED 4K Ultra HD TV?
Haddii aad ku jirto QLED, dooro Samsung QLED TV-yada ugu fiican. Qiimaha, waxaan aad u jecelnahay Samsung Q80T QLED ee sannadkii hore, kaas oo dib kuu dhigi doona € 1,099 / € 1,199 (qiyaastii AU $ 1,500). Si kastaba ha noqotee, haddii aad kor u qaaddo, waxaad arki doontaa in kaliya qaar ka mid ah TV-yada Samsung 8K, sida Q800T iyo Q950TS, ay isticmaalaan tignoolajiyada golaha QLED.
Si kastaba ha noqotee, haddii aadan dan ka lahayn QLED oo aad kaliya rabto 4K TV, raadi kuwa ugu wanaagsan ee 4K TV-yada ah ee daboolaya tiknoolajiyada sida QLED iyo OLED, iyo noocyada isboortiga sida LG, Panasonic, Sony, iyo Philips, iyo sidoo kale Samsung.
Nidaamyada TD-Smart TV Hey Google Kaaliyaha Rasmiga ah - 40 Inj TV, Xakamaynta Codka,...
✅ DVB-T2/C/S2 tuner dhijitaal ah, tuner jiilka labaad oo leh Hbbtv.
Ma waxaad raadinaysaa soo bandhigid qaraar xitaa ka sarreeya? Fiiri liiskayaga TV-yada 8K ee ugu fiican.